Enyemaka maka ecommerce metụtara nsogbu | ECommerce ozi ọma
Enwere otutu ahia e-commerce nke nsogbu ahụ metụtara ma chọọ enyemaka gọọmentị iji gbalịa ịkwalite usoro azụmahịa ha n'oge a. Ka ha nwee ike ịga n'ihu rue mbido Machị ebe e mepụtara mkpu mmekọrịta a dị mkpa nke metụtara ezi ọtụtụ ụlọ ahịa na ụlọ ahịa ntanetị.
N'ebe a, e mepụtara atụmatụ mberede dị iche iche iji kpuchido azụmaahịa ndị a na ọnwa ndị a ebe ịkwụsị ọrụ azụmaahịa. Ma na mmepe nke azum ahia na mmekọrịta ya na ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ. Yabụ na n'ụzọ dị otu a ha nọrọ n'ọnọdụ nke ịga n'ihu na ọrụ ha site ugbu a gawa.
Ahịa metụtara nri Ọ bụ nke ahụ na - eto eto ọ bụrụ na anyị ekwu maka mmeghe ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Kpọmkwem, azụmaahịa dịka ndị na-egbu anụ, ndị na-ere azụ, ndị na-azụ ahịhịa na obere ụlọ ahịa agbata obi bụ ụlọ ọrụ ndị nwere mmasị ịmepe ụlọ ahịa na ịntanetị. Ọ bụ ụzọ ha ga-esi gbalịa ịkwụ ụgwọ maka mmechi nkịtị nke ụlọ ọrụ ha nke gọọmentị guzobere iji lụso ọgụ megide mgbasa nke nje a.
1 Ngalaba na-achọkarị
2 Enyemaka maka freelancers na ụlọ ọrụ
3 Onyinye ndị ọzọ maka SMEs
4 Mkpali iji belata mmetụta nke nsogbu ahụ
Mgbe n'aka nke ọzọ, ụlọ ahịa ọdịnala ọdịnala na-ahụ etu ụbọchị ndị ahịa a si gbasaa iwu ndị a. N'ịbụ ndị nwere ọchịchọ maka ọtụtụ ọrụ, isiokwu na ngwaahịa ndị mmadụ na-achọ n'ụlọ ha chọrọ. Dị ka nri, akwụkwọ, oge ezumike na ngwaahịa ntụrụndụ, ma ọ bụ ngwaahịa teknụzụ
Karịsịa nyere enweghị nzaghachi si anụ ahụ na-echekwa nwere na-emechi ụbọchị ndị a n'ihi nke mgbasa nke nje a. Ruo n'ókè ụfọdụ na mmụba nke usoro azụmahịa ha na-eru ọkwa dị elu karịa 40%. Ebe nsogbu kachasị si na ọnọdụ ebe nchịkọta dị ka ndị ọrụ enweghị ike ịhapụ ụlọ ha.
N'echiche a, anyị ga-echeta n'oge a na isi ihe ndị na-akpaghị aka bụ ndị na-enweta mkpa ugbu a. Ọ bụ ezie na ha chọrọ nnukwu akụrụngwa na ụfọdụ mgbagwoju anya, anyị nwere ike ịchọta ụdị mkpọchi ahụ ruo oge ụfọdụ. N'ozuzu, ha na-anọkarị n'ebe ọha na eze dị ka ebe ịzụ ahịa ma ọ bụ ọdụ ụgbọ njem (na ọbụna nke onwe, dị ka ebe ndị agbata obi na-ahụkarị). Ndị ọrụ ya dị mfe maka onye ọ bụla ebe ọ bụ na ọ dabere na eziokwu ahụ bụ na onye ọrụ ahụ n'onwe ya na-agakwuru ha ma banye na akara ngosi nke na-enye ya ohere ịnweta mbupu ya.
Enyemaka maka freelancers na ụlọ ọrụ
Moratorium na onyinye mmekọrịta maka ụlọ ọrụ na ndị ọrụ onwe ha.
Ọ na-enye ohere nke ịrịọ ka a kwụsịtụ ihe ruru ọnwa isii, na-enweghị mmasị, na ịkwụ ụgwọ nke onyinye Social Security nke oge nnabata ya, n'ihe banyere ụlọ ọrụ, dị n'etiti ọnwa Eprel na June na, n'ihe banyere onwe -ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, n'etiti Mee na July 2020. Na mgbakwunye, ha nwere ike ịrịọ ka yigharia nke ịkwụ ụgwọ nke ụgwọ ha na Social Security, oge iwu maka ntinye nke ga-eme n'etiti ọnwa Eprel na June.
Enyemaka maka njem nleta.
A ahịrị nke Inye ego ICO karịrị 400 nde maka ụlọ ọrụ ndị njem, yana nkwa nke 50% sitere na Mịnịstrị nke Mmepụta, Azụmaahịa na Njem Nleta. Ke adianade do, n'ihi na njem ụlọ ọrụ (gụnyere azụmahịa na hotels jikọtara ndi oru), na ego nke 50% nke onyinye azụmaahịa na Social Security na ofu discontinuous contracts maka contracts si February na June. N'otu aka ahụ, iji hụ na ụlọ ọrụ ndị njem na-eme njem ma na-adị ire, akwụ ụgwọ ọmụrụ nwa na amortization kwekọrọ na mgbazinye ego nke Secretary nke State maka njem na usoro nke Emprendetur Mmemme kwụsịtụrụ otu afọ na enweghị ntaramahụhụ ọ bụla ụdị ya dị iche iche nke R + D + i, ndị ọchụnta ego na mba ụwa.
Onyinye ndị ọzọ maka SMEs
Otu n'ime ihe enyemaka maka SME na ndị ọrụ onwe ha bụ ihe ndị a anyị kwuru n'okpuru:
Kwụsị ọrụ. Ndị ọkachamara na-ahụ maka onwe ha na-ahụ ego ha belata site na 75% n'ihi nsogbu coronavirus, nwere ike ịnweta ihe akpọrọ "enweghị ọrụ nke ndị ọrụ onwe ha". Ego ole ha ga enweta ga-agbakọ dabere na ntinye ego kwa ọnwa maka ọnwa isii gara aga. Nyere na 80% nke ndị ọrụ onwe ha na-akwụ ụgwọ opekata mpe, ego ole ndị ọrụ onwe ha ga-enweta ga-abụ ihe dịka euro 660 kwa ọnwa. Iji họrọ maka ịkwụsị ọrụ, ma ọ bụ kpọọkwa enweghị ọrụ nke ndị ọrụ onwe ha, ọ dị mkpa na onye ọrụ ahụ ruru ụbọchị na ịkwụ ụgwọ na Social Security ma debanye aha ya na Ọchịchị Pụrụ Iche nke Ndị Ọrụ Kwesịrị Ekwesị ( RETA) n'oge enyere iwu mkpuchi na March 14. Ndị ọrụ onwe ha na ndị ọchụnta ego nọ ná mkpa ga-aga ụlọ akụ iji rịọ maka ego a.
Ntughari a kwadoro. Ndị ọrụ nke onwe ha ga-enwe ike ịkwụsị ụgwọ ndị ha nwere na Social Security. Ego ndị ọrụ ndị ọrụ onwe ha ga-arụ n'agbata Eprel na June nke afọ ụlọnga a nwere ike ibigharị, na-etinye mmasị 0.5%. A kwadoro ọnwa isii maka ịkwụ ụgwọ ọrụ na Social Security maka Mee, June na July maka ndị ọrụ onwe ha na ndị ọchụnta ego. Ndị a, na mgbakwunye, agaghị enwe ụgwọ ma ọ bụ mmasị.
Atụmatụ ezumike nka. Ndị ọrụ onwe ha ma ọ bụ ndị ọchụnta ego a manyere imechi ọrụ ha nwere ike ịnweta nnapụta nke atụmatụ ezumike nka ha.
Gbazinye ego. A kwụsịtụrụ ịkwụ ụgwọ ụlọ maka ọnwa atọ maka ndị ọrụ aka ha metụtara. Iji mee nke a, ha ga-edozi nkwupụta dị mkpa nke gosipụtara ngwangwa ma nwee ike kwụsịtụ ụgwọ ha maka ọnwa atọ.
Njikọ mmekọrịta eletriki. Ebumnuche maka ndị ọrụ onwe ha bụ ndị kwụsịrị ọrụ ha ma ọ bụ ndị belata ego ha na-akpata ma ọ dịkarịa ala 75%. Ha ga-enwe ike ịkwụsị ụgwọ ego maka gas na ọkụ eletrik maka ọnwa isii.
Ndị ọrụ onwe ha na-ebute site na coronavirus. Ndị ọrụ onwe ha bụ ndị daa ọrịa site na Covid-19 ka a ga-ahụta dị ka ihe ọghọm ọrụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ha nwere ike ịnakọta uru maka ezumike ọrịa. Ego maka ndị ọrụ onwe ha na-enye onyinye site na obere ntọala bụ euro 23,61 maka ụbọchị ọ bụla ha na-anọghị. Isi ihe dị iche na ihe omume na a na-ewere ya dịka ọrịa nkịtị bụ na onye ọrụ onwe ya n'okwu ndị a na-enweta elele site na ụbọchị nke anọ na ọnụọgụ bụ 60% nke usoro nhazi.
Inye ego. Gọọmentị ekwuputala usoro nke nkwa ga-ekpuchi 80% nke ihe egwu dị na mgbazinye ego nke ụlọ akụ nyere ndị ọrụ onwe ha na obere ụlọ ọrụ. Kpọmkwem, a ga-ekenye euro 10.000 ijeri na nke a. Ndị ọrụ onwe ha na ndị ọchụnta ego nọ ná mkpa ga-aga ụlọ akụ iji rịọ maka ego a.
Bonuses na gara aga contracts. Karịsịa na ngalaba dịka ile ọbịa ma ọ bụ azụmahịa, ha abanyela na nkwekọrịta na-akwụsị akwụsị tupu nsogbu coronavirus. Ndị nkwekọrịta ndị a gụnyere ụfọdụ ego. Social Security ekwuputala na ọ na-akwado enyemaka a maka nkwekọrịta ọ bụla edepụtara ruo ọnwa Juun. Ndị ọrụ onwe ha na ndị ọchụnta ego nọ ná mkpa ga-aga ụlọ akụ iji rịọ maka ego a.
Mkpali iji belata mmetụta nke nsogbu ahụ
N'ime mkpọsa a, ekwesiri ịkọwapụta na ePages, otu n'ime ndị na-eweta ngwanrọ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, chọrọ inyere ndị azụmaahịa metụtara n'oge nsogbu coronavirus na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị n'efu ka ha nwee ike ịga n'ihu ire. Site na atụmatụ "stayopen", ụlọ ahịa emechiri emechi nwere nhọrọ nke ịmepụta ụlọ ahịa nke aka ha n'efu yana ọrụ ya niile, nke ga-enyere ha aka imebi nsogbu akụ na ụba nke ọnọdụ dị ugbu a, ka ndị ahịa ha wee nwee ike ịga n'ihu na-azụ ahịa n'ụlọ. Ọrụ ahụ ga-adịgide n'efu ruo na njedebe nke June, ma ọ bụ karịa ma ọ bụrụ na mgbochi na oghere ụlọ ahịa na-adịgide.
Ihe ndị a na-eme megide coronavirus, nke gụnyere mmechi nke ụlọ ahịa anụ ahụ, na-eweta nnukwu nsogbu na mpaghara nkesa. Wilfried Beeck, onye guzobere na onye isi oche nke ePages na-ekwu, "Ọnọdụ mberede, ọkachasị ndị nwere obere azụmaahịa, metụtara ndị na-ere ahịa." “Ọ bụ ezie na e-commerce na-eto eto ma na-enye ikikere n'oge nsogbu, azụmahịa anụ ahụ na-agba mbọ iji nọgide na-arụ ọrụ. Site na akụrụngwa anyị dabere na igwe ojii, anyị nwere ike ị nweta ọsọ ọsọ ngwọta nye ọtụtụ puku ndị ahịa. "
Ọtụtụ ndị mmekọ ePages na-akwado atụmatụ "stayopen": ụlọ ọrụ nnabata Hostalia na Spain; ndị na - eweta ọrụ ịkwụ ụgwọ Payone, njikọta nke Ingenico Group na Deutscher Sparkassenverlag, na VR Payment, ngalaba nke ịkwụ ụgwọ nke Volks- und Raiffeisenbanken Bank na Germany; onye na-eweta nnabata Hostpoint na Switzerland; Igbe e-commerce nke Société SAS na France; Vtù Vilkas dị na Finland; eCorner na Australia; na Dominios.pt. na Portugal. Ruo ugbu a, ụlọ ọrụ ndị a niile esonyela n’atụmatụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Enyemaka ecommerce metụtara nsogbu
Gịnị bụ Correos Express?